महायज्ञमा सुरक्षा व्यवस्था मजवुत छ – Rajmarg Online
महायज्ञमा सुरक्षा व्यवस्था मजवुत छ
घोराहीदेखी ९ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पाण्डवेश्वर महादेव धाममा आजदेखी श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ लाग्दैछ । बजार क्षेत्र भन्दा टाढा मन्दिर परिसरमै महायज्ञको आयोजना गरीएकोले सुरक्षा चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।
अहिलेसम्म आयोजना भएका महायज्ञ भन्दा फरक उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको महायज्ञको सुरक्षाको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले उचित प्रवन्ध मिलाउने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन् । त्यस्तै शसस्त्र प्रहरीले पनि शुरक्षा दिने बताउदै आएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयले पनि सुरक्षा दिने बताएको छ । मन्दिर परीसरमै महायज्ञको आयोजना गरीएको छ । सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाईएको छ भन्ने वारेमा गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिकका लागि सन्तोष अधिकारीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप …………….सम्पादक ।
महायज्ञ सुरक्षा उपसमिति
१ आजदेखी आयोजना हुनलागेको महायज्ञको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ ?
धारपानी एक पवित्र स्थल हो । यहाँको धार्मिक मान्यताले गर्दा पनि एक खालको मनोविज्ञान रहि आएको छ । तै पनि महायज्ञ स्थलको सुरक्षाको लागि मन्दिर परीसरमै रहेको अस्थायी प्रहरी पोष्टमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले संख्या बढाएको छ । मन्दिरको चारैतर्फ तथा महायज्ञ स्थललाई विचमा पारेर नेपाल प्रहरीको घेरा रहने छ ।
सुरक्षाको रणनीति नेपाल प्रहरीको आफ्नै प्रकारको रहेकोले त्यो विषयमा जानकारी दिनु नपर्ला । त्यस्तै महायज्ञ परीसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नै प्रकारले अनुसन्धानका कर्मचारीहरु खटाउने छ । त्यसैगरी शसस्त्र प्रहरीले पनि महायज्ञको उद्घाटन देखी महाशिवरात्री पर्वसम्म सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने आश्वासन हामिले पाएका छौ । त्यसैगरी आयोजक समितिले पनि स्वयंसेवकको रुपमा एक घेरा बनाएर सुरक्षा प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ । यीनै सुरक्षा संयन्त्रहरु परिचालन गरी महायज्ञ सञ्चालन गर्ने तयारी हाम्रो रहेको छ ।
२ महायज्ञको उद्घाटन र त्रीशुल उद्घाटनको दिन सुरक्षा व्यवस्था फरक छ ?
अवश्य पनि सुरक्षा कडा हुने नै छ । महायज्ञको उद्घाटनका लागि संघिय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरा आउदै हुनुहुन्छ भने त्यो दिन नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा दिने छ । घोराही देखी धारपानी सम्मको सवै क्षेत्रमा जिल्ला स्थित सुरक्षा सन्यन्त्रहरु सकृय हुनेछन् । त्यसैगरी १४ गते त्रीशुल उद्घाटनका लागि पर्यटन संस्कृति तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अन्य दिन पनि सुरक्षाको व्यवस्था भने मजवुद नै छ भने नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सभामुख आउने दिन सुरक्षा व्यवस्था अलि कडा हुने स्वाभाविक नै हो ।
३ धारपानी जंगलको नजिकै भएकोले सुरक्षा चुनौति छ भन्छन् त ?
धारपानी धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्र हो । यो सवैको साझा सम्पत्ति पनि हो त्यसैले यसको सुरक्षा र विकाश गर्नु हामी सवैको दायित्व पनि हुन आउछ । सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी भन्दा पनि बढि सुरक्षा त हामिले गर्नुपर्ने हुन्छ । तै पनि हामीले सुरक्षा निकाएको सहयोग लिएका छौ । सवैले धारपानीको विकाशका लागि एकपटक गहिरिएर सोच्यौ भने सुरक्षामा चुनौति छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अव रह्यो जंगल नजिक भएकोले सुरक्षा चुनौतिको कुरा । अहिले गाँउघरमा भन्दा शहर बजारमा चोरीका घटनाहरु बढि हुने भएकोले यो यकान्त ठाँउ, यो पुण्यभुमिमा त्यस्तो हुदैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौ । हाम्रा प्रमुख बाचक वाचन प्रविण पंण्डित दीनवन्धु पोखरेल पनि सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएकोले मन्दिरकै धर्मशालामा बस्नुहुने भएको छ । हामिले उहाँको बस्ने प्रवन्ध यतै मिलाएका छौ । त्यसैले सुरक्षा चुनौती छ भन्नु गलत प्रचार मात्र हो ।
४ जिल्लाका सुरक्षा सन्यन्त्रले कहिलेसम्म सुरक्षा दिने भएका छन् ?
धार्मिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापना गरेर सुरक्षा दिदै आएको छ भने अहिले आयोजना हुन लागेको महायज्ञका लागि ११ गते देखी सुरु हुनेछ । महायज्ञको १८ गते समापन हुने छ । त्यसैगरी २० गतेको महाशिवरात्रीलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायले २० गते राती सम्म सुरक्षा दिने छन् । त्यसैगरी नेपाली सेनाले महाशिवरात्रीका दिन पाण्डवेश्वर धाममा गई सलामी लिने कुरो भएको छ । सलामीका लागि नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणवाट नेपाली सेना विहान धारपानी मन्दिर जाने छ ।
५ यातायातका सवारी सधानको सुरक्षा पनि गर्नुहुन्छ कि हुदैन ?
यातायातको सुरक्षा भन्दा पनि सहजताका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मदनबहादुर कुँवरले सहमति जनाउनु भएको छ । यातायातका सवारी साधनको चाप अलि वढि हुने भएकोले रुट गाईडको कुरा तथा सडकमा सञ्चालीत सवारी साधनको व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीले गर्ने छ भने महायज्ञस्थलमा पार्किङगरी राखेका सवारीका साधनहरुको सुरक्षाको जिम्मा भने आयोजक समितिले नै गर्ने छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पहिले देखी नै पार्किङ शुल्क लिएर सुरक्षा दिदै आएको थियो भने अहिले पनि त्यो लागु हुने छ ।
६ अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
महायज्ञ तथा शिवरात्री पर्वमा दर्शन तथा अवलोकनका लागि आउने भक्तजनहरुलाई सुरक्षाको चिन्ता नलिई ढुक्क संग आउनका लागि आग्रह गर्दछु । त्यस्तै धार्मिक स्थलमा महायज्ञ स१चालन गर्नुको उद्देश्य हुने गर्छ । धारपानी धाममा पनि गौशाला निर्माण तथा बेद पाठशाला निर्माणको लक्ष्यलाई सफलतामा पुराउनको लागि यहाँहरुको सहयोग हुने छ भन्ने आशा लिएको छु ।
धारपानी मन्दीरमा आयोजना हुनलागेको महायज्ञमा कथा श्रवण गर्न तथा शिवरात्रीमा पाल्नुहुने भक्त तथा पर्यटकहरुले सहजता महशुष गर्नेगरी सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाएका छौ । त्यस्तै महायज्ञका वेलामा त्यहाको सुरक्षा अवस्थाको वारेमा जानकारी दिनका लागि स्थान दिएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद छ ।